'INedbank Cup ingazesula izinyembezi zabalandeli bePirates' | News24
'INedbank Cup ingazesula izinyembezi zabalandeli bePirates'
Johannesburg - Ikilabhu i-Orlando Pirates isangakwazi ukupholisa amanxeba abalandeli ngokuthi ithathe isicoco seNedbank Cup kulandela ukungenzi kahle kule sizini, ngokusho kwalowo owayengumdlali wayo, uLucas Tlhomelang.
UTlhomelang ukholelwa ukuthi uma iBhakabhaka ingathatha le nkomishi, lokho kuzokwesula izinyembezi zabalandeli.
“Ngicabanga ukuthi kuzomele izame ukuwina iNedbank Cup ngoba lokho kuzokwesula izinyembezi zabalandeli. Ngisho ingangeni kwi-top 8, ukunqoba iNedbank Cup kuzokwesula ezinyembezi kwabanye babalandeli. .
Uthe kuzomele nakanjani bawinele le nkomishi abalandeli kanye noSihlalo, u-Irvin Khoza.
OLUNYE UDABA: IDowns iqinisekise eyokuvuselelwa kwenkontileka yesethenjwa
Uphinde wathi usihlalo waleli qembu ubenzele okuningi abadlali, waze wabalethela nomqeqeshi omusha uKjell Jonevret.
“Ume nabo ngaso sonke isikhathi,” esho.
IPirates kulo nyaka igubha iminyaka engu-80 yasungulwa kanti uTlhomelang ukholelwa ukuthi ukuthatha isicoco kuzokwenza ibungaze kahle lo nyaka.
IBhakabhaka lizobhekana neSuperSport United kowamanqamu weNedbank Cup, eMoses Mabhida Stadium, ngoJuni 24.